” အကောင်း အဆိုး ဆိုကြရာဝယ် “
November 22, 2017 By Buzz Myanmar News in ဗဟုသုတ, အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ, အမျိုးသားဆိုင်ရာ Tags: အတွေးအမြင်, ဆောင်းပါး
ကျွန်တော့် ဆရာကိုမြတ်မင်းကိုမေးဖူးသည်။ ပန်းချီကား တကားကောင်းမကောင်းကို ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်သလဲ…???ဘယ်လိုသိသလဲ …??? ဟူ၍ဖြစ်၏။
ကျွန်တော့်ဆရာ ပြန်လည် ရှင်းပြသည်မှာ(museum) ပြတိုက်တွေ သွား” ပန်းချီကား ကောင်းကောင်းတွေများများကြည့် ” ဟူပေတော့သည်။ကျွန်တော့်ဆရာ ကျေးဇူးကြောင့်(museum) ပြတိုက်တွေ သွားစရာမလိုဘဲသူစုဆောင်းထားသော ရှေးဆရာ့ ဆရာ ဆရာကြီးများ၏ပန်းချီကားကောင်း မြောက်များစွါကို ကြည့်ခွင့်ရခဲ့သည်မှာတော့ လူဖြစ်ရကျိုးနပ်သည့်အထဲကတခုဟုပင် ဆိုချင်ပေတော့၏။
မြန်မာ ပျူ ရခိုင် ဒင်္ဂါးများနှင့်British India ငွေဒင်္ဂါးများ စုဆောင်း လေ့လာရတာ ဝါသနာပါသောကျွန်တော်သည် ကိုရဲ (Daniel Yel Zatt) ထံမှသူစုဆောင်းထားသော ဒင်္ဂါးများကို ကြည့်ရှုခွင့်ရသောအခါ တော်ရုံသာမာန်ဒင်္ဂါးတို့သည် မျက်စိတွင် ဒင်္ဂါးကောင်းများအဖြစ်မယူဆမိတော့သလို စိတ်တွင်လည်း အကြိုက် မတိုးတော့ ။
အစားအသောက် အကောင်းဆုံးတခုခုအား စားဖူးထားသူသည် တခြားသောအလားတူ အစားအစာမျိုး စားကြည့်လေကမတူခြားနားသော အရသာကို နှိုင်းယှဉ်သိခြင်းအားဖြင့် သိပြီး မည်သည့်ဟာပိုကောင်းသလဲဆိုသည်ကို လွယ်ကူစွါသိရှိနိုင်ပေလိမ့်မည်။ကျွန်တော်တို့သည် နေရာတော်တော်များများ၌ အထက်ပါနှိုင်းယှဉ်သိ ဖော်မြူလာကို အသုံးချနိုင်ကြပေ၏။
ဆရာမ ကြည်အေးကလည်းယခုလို ပြောခဲ့ဖူးကြောင်း မှတ်သားရပါသည်။” လူကောင်းဖြစ်ချင်ရင်တရားကောင်းကို လေ့လာရသလို…စာကောင်း ကဗျာကောင်း ရေးချင်ရင်စာကောင်း ကဗျာကောင်း များများဖတ်ကြ။ ” ဟူ၏။ဆရာမကြည်အေး ပြောကြားသည်ကိုကျွန်တော့်ဆရာ ကိုမြတ်မင်း အထက်တွင် ပြောတာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လေက ဦးတည်ရာတူညီသည်ကို တွေ့ရသည်။အကြင်အခြင်းအရာတခုအားကောင်းမကောင်း ဆန်းစစ်ကြရာ၌ နှိုင်းယှဉ်သိမြင်ခြင်းအခြေခံအကြောင်းရင်းသည် အဓိက လိုအပ်ချက်တခုဖြစ်ပေတော့၏။
ဤနေရာတွင် ပြောစရာရှိလာသည်မှာခေတ်ကာလ မတူညီ ဖန်တီးပုံ အကြောင်းအရာအမျိုးအစား မတူညီသော အရာနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်သိဖြင့် ဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်လေက အဖြေမှန်ထွက်ပါ့မလားဟူ၍ မေးစရာရှိလာပေတော့သည်။
အနုပညာ ဖန်တီးမှုတိုင်းတွင်ဖြစ်စေ…တစုံ တခုသော အရာအား ဖန်တီးလျှင်ဖြစ်စေ …အခြေခံအားဖြင့် ဝါသနာနှင့် စေတနာ အနစ်နာ နာသုံးနာ အရင်းခံ ကြရပေ၏။အရင်းစစ် အမြစ်မြေက ဆိုသည့်နှယ် မည်သည့်ဖန်တီးမှုတွင် ဖြစ်စေ ဤသုံးချက်ကိုဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်လျှင် သိသာထင်ရှားပေတော့သည်။
ကျွန်တော် သိသော နယ်ပယ်အရ လက်လှမ်းမှီသလောက်ပြောရပါမူ ပန်းချီ စာပေရေးရာ ကဗျာဖန်တီးမှု နှင့်နိုင်ငံရေး လောကတို့တွင် ရှေးလူကြီးများလောက်ယခု ခေတ်ပြိုင် လူသားများသည် ဝါသနာ စေတနာ အနစ်ခံမှု အားတွင် ခြေဖျားပင် မမှီကြကြောင်း တွေ့မြင်ရ၏။
ထိုသို့ အခြေခံ အဓိကကျလိုအပ်သော အချက်များဖြစ်သည့် ဝါသနာ စေတနာ အနစ်နာခံမှုများချို့ယွင်း အားနည်းဆုတ်ယုတ်လာသော ကျွန်တော်တို့လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်များသည်လည်းဆုတ်ယုတ် အားနည်းလာသည်ကို အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရပေလိမ့်မည်။
လောက၌ မည်သည့်ကျရောက်ရာနယ်ပယ်တွင်မဆို ဝါသနာ အခြေခံကသာကောင်း၏။ဝါသနာ မပါဘဲ အကြောင်းကြောင်းကြောင့်လုပ်ကိုင်ရသော နေရာများ၌မူ စေတနာ အရင်းခံသင့်ပေ၏။ စေတနာတွင် အနစ်နာခံမှုဖြည့်စွက်လိုက်ချေက အချိုပေါ် သကာဆင့်ဆိုရမလိုပင်။
မိမိအကျိုးအတွက် ဖြစ်စေ အများအကျိုးတွက်ဖြစ်စေမည်သည့်အလုပ်မဆို စေတနာ ချို့တဲ့ချေက အလုပ်ကောင်းမမည်။
အကောင်း လုပ်သည် မခေါ်။ကြိုးချည်၍လှော်သည့် ပမာနှယ်ပင် ဖြစ်ရချေမည်။စေတနာ အရင်းမခံသော အကြင်အကြောင်းကိစ္စသည်ကောင်းတာလုပ်သော်လည်း ကောင်းတာမဖြစ်တတ်သောသဘောသဘာဝ ရှိလာတတ်၏။
စေတနာထားရှိမှုသည် အဓိကအရေးကြီးသောအခြေခံ လိုအပ်ချက် တခုဖြစ်သော်လည်းကျွန်တော်တို့သည် အကြင်အကြောင်းကိစ္စနှင့်ဖန်တီးမှုတို့အပေါ်တွင် စေတနာ တခုတည်းဖြင့်လည်းမပြည့်မစုံ ဖြစ်နေမှာ အမှန်ဖြစ်ပြီး လုပ်ပုံလုပ်နည်းမှန်ကန်ဖို့ရာလည်း လိုအပ်ချက်တခု ဖြစ်လာသည်။
စေတနာ ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းလုပ်ပုံ လုပ်နည်း မမှန်ကန်က လိုရာခရီးမရောက်။စေတနာလည်း ကောင်းရမည်လုပ်ပုံ လုပ်နည်းလည်း မှန်ရမည် ။ဤသို့မှသာ လိုရာခရီး ရောက်ပေတော့၏။ဤစကား မှန်ကန်ကြောင်းကို ငါးရာ့ငါးဆယ် ဇာတ်နိပါတ် အတ္ထကာမဝဂ်လာရောဟိဏီဇာတ်တော်၌ ထင်ရှားလေသည်။
အနာထပိဏ်သူဋ္ဌေးတွင် ရောဟိဏီမည်သောကျွန်မရှိလေသည်။တရက်သောအခါ အမိသည်အိပ်နေစဉ် ယင်ကောင်များ နှောင့်ယှက်လွန်းသဖြင့်ရောဟိဏီအား တားဆီးခိုင်းလေရာ ယင်ကောင်များကိုကျည်ပွေ့ဖြင့်လိုက်ရိုက်လေ၏။ယင်ကောင်ကို ကျည်ပွေ့ဖြင့်မရိုက်မိဘဲ အမိဖြစ်သူ၏ ဦးခေါင်းကို အရှိန်လွန်ရိုက်မိလေရာဒဏ်ကြောင့် အမိသေလေတော့၏။
အလားတူ ဇာတ်တော်တခုမှာငါးရာ့ငါးဆယ် ဇာတ်နိပါတ် အတ္ထကာမဝဂ်လာအာရာမဒူသက ဇာတ်တော်ဖြစ်၏။
ဤဇာတ်တော်သည် တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်သူများနှင့်တကွ အစိုးရမင်းများအဖို့ မှတ်သား နာယူ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ဖွယ် အလွန်ကောင်းသော ဇာတ်တော်ဖြစ်လေသည်။
ဗာရာဏသီပြည်၌ ဗြဟ္မဒတ်မင်း စိုးစံစဉ်တနေ့သောအခါ နက္ခတ်သဘင်ပွဲချိန်နှင့် တိုက်လေရာ မင်းကြီး၏ ဥယျာဉ်မှူးသည်လည်းနက္ခတ်ပွဲကို ပါဝင်ဆင်နွှဲရန် ပိုးထလေတော့၏။သို့ဖြင့် ဥယျာဉ်ထဲမှ မျောက်တို့၏ ခေါင်းဆောင်မျောက်ကြီးထံသွား၍ ဤဥယျာဉ်သည် သင်တို့အတွက် အလွန်ကျေးဇူးများလှသည်။အသီး အပင် အရွက်များကို သင်တို့ စားကြရသည်။
ငါပြန်မရောက်မချင်း သစ်ပင်များကို ရေလောင်းရစ်ကြဟုအမှာ ထားခဲ့ကာ နက္ခတ်ပွဲသဘင်ကျင်းပရာသို့ထွက်ခွါသွားလေတော့၏။ဥယျာဉ်ထဲမှ မျောက်များသည် မျောက်ကြီးညွှန်ကြားချက်အရ ဥယျာဉ်တွင်း သစ်ပင်များကိုရေလောင်းကြပေတာ့သည်။ မျောက်ကြီး၏အံ့သြနဘန်း စေခိုင်းချက်ကား ” အို မျောက်အပေါင်းတို့ရေကို ဆင်ခြင်၍ သုံးတတ်ရမည်။ရေမလောင်းမီ သစ်ပင်ငယ်များကို ဦးစွါနုတ်၍ ကြည့်ကြ။
အမြစ်ရှည်သည့်အပင်ကို တွေ့လျှင် ရေများများလောင်းကာ အမြစ်တိုလျှင် သင့်ရုံသာလောင်းကြ။ နောင်တချိန် ရေအခက်အခဲ ရှိနိုင်သည် “ဟူပေတော့သတည်း …မျောက်ငယ်များလည်း မျောက်ကြီး ခိုင်းသည့်အတိုင်းပြုလုပ်ကြလေရာ ဥယျာဉ်တခုလုံး အစိုးရမကောင်းသည့်ဒဏ်လှိမ့်ပိမ့်ခံရသည့် မြန်မာပြည်အလား သစ်ပင်ပန်းမန်အပေါင်းထောင်းလမောင်း ကျေလေတော့၏။
အထက်ပါ ဇာတ်တော်တို့တွင် စေတနာထားသည်ကားမှန်၏။ လုပ်ပုံလုပ်နည်း မမှန်ကန်လေသောအခါအကောင်းလုပ်ပါသော်လည်း အကျိုးရလာဒ်တွင်မူဆိုးဝါး ပျက်စီးရသည်ကို မှတ်သားဆင်ခြင်ဖွယ်တွေ့ရလေတော့သည်။
ထို့ကြောင့် မည်သည့်အလုပ်တွင်ဖြစ်စေစေတနာလည်း ကောင်းရမည်လုပ်ပုံ လုပ်နည်းလည်း မှန်ရမည် ။ဤသို့မှသာ လိုရာခရီး ရောက်ပေတော့မည်ဟုမုချ မှတ်သားထိုက်လေ၏။ယနေ့အခါသမယ၌တိုင်းပြည်အပေါ် စေတနာထားကြသောအစိုးရသစ်လူကြီးမင်းများနှင့်တကွနယ်ပယ်အသီးသီးမှ လူတို့သည်လည်းနေရာအနှံ့ အသီးသီး ပေါ်ထွန်းလာကြသည်ကိုအားရစဖွယ် မြင်တွေ့ရပါသည်။
စေတနာအခြေခံရှိနှင့်ပြီးသော လူများဖြစ်ကြသည့်အတွက်စေတနာတွင် လုပ်ပုံလုပ်နည်း မှန်ကန်မှုတဖြစ်လည်းမှန်ကန်သော အားထုတ်မှုများဖြည့်စွက်လိုက်လေကအချိန်တိုအတွင်း တိုင်းပြည်တိုးတက်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
စာပေနယ် နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်များနှင့်တကွ ပရဟိတ နယ်ပယ်များသည်လည်းပြည်သူများနှင့် လွန်စွါ နီးနီးကပ်ကပ် ကူးလူးဆက်ဆံလာပြီ ဖြစ်ရာ မည်သူကတော့ဖြင့်စေတနာကောင်းထားသည် မထားသည်ဆိုသည်ကိုပြည်သူနှင့် ပရိတ်သတ်က လွယ်ကူစွါ အချိန်တိုအတွင်းသိရှိလာပြီဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် စေတနာမှန်သော်လည်း လုပ်ပုံလုပ်နည်း မှားယွင်းနေသော လုပ်ပုံလုပ်နည်း မှန်ကန်ပါသော်လည်း စေတနာချို့တဲ့နေသော ကိုယ်စားလှယ်တော်များ အနုပညာရှင်နှင့် စာပေနယ်မှ သူများ တိုင်းသူပြည်သားများကိုလည်း တိုင်းပြည်အကျိုးရှေးရှုကာ စေတနာအခြေခံပြီး သကာလ မှန်ကန်သော လုပ်ရပ်များဖြင့်ပြည်ကျိုး ပြုနိုင်ပါစေကြောင်း ဆန္ဒပြုရေးသားရင်း ” အကောင်း အဆိုး ဆိုကြရာဝယ် “စာစုကို နိဂုံးချုပ်လိုက်ရပေတော့သတည်း ။